हिन्दुहरुले चर्चको पाष्टरलाई घरबाट जर्वजस्ती निकालेर निर्मम कुटपिट !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > हिन्दुहरुले चर्चको पाष्टरलाई घरबाट जर्वजस्ती निकालेर निर्मम कुटपिट !!
हिन्दुहरुले चर्चको पाष्टरलाई घरबाट जर्वजस्ती निकालेर निर्मम कुटपिट !!
९ बैशाख | भारतको मध्य प्रदेश राज्यको कोन्द्रीमा रहेको एउटा चर्चको पाष्टरलाई हिन्दु अतिबादीको समुहले घरबाट जर्वजस्ती निकालेर उनको घरमा भेला भएर प्रार्थना गरिरहेका प्रार्थनाकर्ताहरुलाई कुटपिट गरेको छ । त्यसपछि पाष्टरको घरमा हिन्दु अतिबादीहरुले आगो पनि लगाईदिएका छन। ज्यान बचाउनको लागि पाष्टर भने नजिकैको जंगलतिर भागेका थिए ।चेनसिंह बासुनिया नाम गरेका २६ बर्सिय
ती पाष्टरले पछि मात्र थाहा पाए कि उनको घर तq हिन्दु अतिबादीहरुले जर्वजस्ती मानिसहरुलाई क्रिश्चियन बनाउएको आरोप लगाउँदै जलाईदिएका रहेछन ।घरेलु चर्च रहेको पाष्टरको घर जलाउने क्रममा दुईजना बिश्वासीहरु गम्भिर घाइते बनेका छन । यो ज्यादै दर्दनाक घटना भयो, पाष्टरले भने । आक्रोसित हिन्दुहरुको समूहले प्रार्थना गरिरहेकै बेलामा जर्वजस्ती कुटपिट गर्ने काम सुरु गरे ।
स्थिति नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकारको थिएन । एउटा कोठामा भएको उक्त चर्चको भुईमा रगत रगत भएको थियो । यसै बीचमा भीडको बीचबाट कसैले चिच्याएर भन्यो पाष्टरलाई मार, पाष्टरलाई मार । आफ्नो ज्यानलाई खतरा भएको देखेपछि पाच जनालाई लिएर म जंगलतिर भागेँ, बासुनियाले भने ।आक्रमणकारीहरुले दुई किलोमिटरसम्म उनीहरुलाई खेदेका थिए । आखाँले नदेख्ने भएपछि मात्र उनीहरुले खेद्न छाडेका थिए ।
अध्यारो बनमा रात बिताउँनुपर्दा भयभीत अवस्था थियो । भोलिपल्ट घरमा आउँदा बिश्वासीहरुलाई उनीहरुले हामीले पाष्टरलाई अझै पनि खोजिरहेका छौ भनेर चेतावनी दिएका रहेछन । घर पनि सबै जलेको रहेछ ।
हिन्दु अतिबादीहरुले मानिसहरुलाई जर्वजस्ती क्रिश्चियन बनाएको आरोप लगाएर बासुनिया बिरुद्ध प्रहरीमा रिपोर्ट पनि गरेका रहेछन । बासुनिया अहिले नजिकको अर्कै सिटीमा बसेका छन भने उनलाई फेरि कोन्द्री फर्कन गाह्रो परिरहेको छ । किनभने प्रहरीले पनि उनलाई खोजिरहेको छ भने हिन्दु अतिवादीले उनलाई मरेको हेर्न चाहेका छन ।
यिनै हुन् फुटपाथको बच्चालाई टिपेर अशोक दर्जी बनाउने वास्तविक हिरो आखिर को हुन् रुपक सापकोटा ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो सहित